မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ့ ဖ်ားေယာင္းမႈကို ဓားမျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုလွီးၿပီး ေျဖရွင္းျပခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ...! - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစံု / ျဖစ္ရပ္မွန္ / မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ့ ဖ်ားေယာင္းမႈကို ဓားမျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုလွီးၿပီး ေျဖရွင္းျပခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ...!
မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ့ ဖ်ားေယာင္းမႈကို ဓားမျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုလွီးၿပီး ေျဖရွင္းျပခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ...!
Apann Pyay 12:53 PM ဗဟုသုတအစံု , ျဖစ္ရပ္မွန္ Edit
“ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဒကာမနေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ” ဟု ဆရာတော်က ဆိုသော်လည်း “တစ်ညတည်းပါ “ ဟုသော မိန်းမငယ်အသံကြောင့် “အင်း..ဒုက္ခပါတကား” ဟု ဆရာတော်ငြီးတွားမိသည်။ နှင်လို့လည်းမဖြစ် ၊ တည်းခိုင်းပြန်၍လည်း မဖြစ် စဉ်းစားရခက်နေပြီး နောက်ဆုံး ကျောင်းရှေ့စင်္ကြန်တွင် အိပ်ခိုင်းပြီး အတွင်း၌ မင်းတုံးချကာ ဘဝနာပွားနေလေသည်။ ဒီတစ်ညတော့ မအိပ်တော့ဟု ဆရာတော်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ခဏကြာသော် အမျိုးသမီးသည် တံခါးကို တဒိုင်းဒိုင်းထုပြီး “တပည့်တော် ချမ်းလွန်းကြောက်လွန်းလို့ အတွင်းမှာဝင်အိပ်ပါရစေ” ဟု ခိုက်ခိုက်တုန်နေသော အသံဖြင့် လျှောက်သည်။ သို့ဖြင့် ကရုဏာစိတ်ကြီးမားသော ဆရာတော်သည် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီး ကျောင်းအပြင်ထွက်ကာ တရားထိုင်နေသည်။ မကြာမီပင် အတွင်းမှအမျိုးသမီးငယ်မှာ မအိပ်ဝံဟု ဆိုသဖြင့် ဆရာတော်ကျောင်းအတွင်းသို့ ဝင်လာရပြန်သည်။ စုတ်ပြဲနေသော အင်္ကျီ ရင်ကွဲထဘီနှင့် အမျိုးသမီးမှာ ဆရာတော်အားဆွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေသည်။
တကယ်တော့ ထိုအမျိုးသမီးငယ်မှာ မင်းသမီးတစ်ပါးသာဖြစ်သည်။ တောင်ဖီလာဆရာတော်၏ အကျင့်သိက္ခာကိုစမ်းသပ်ရန် သာလွန်မင်းမှ လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းသမီးလည်းမင်းမိန့်ကိုကြောက်လန့်သဖြင့် ဆရာတော်အား ဖျက်စီးခဲ့ပါပြီဟု လိမ်ညာ၍ လျှောက်တင်လေသည်။ တမုဟုတ်ချင်းပင် ထိုသတင်းသည် ပြန့်နှံသွားတော့သည်။ ယုံသူကလည်း ယုံ ၊မယုံသူကလည်း မယုံ ။ ထိုအခါ အလှူအတန်းပြုလုပ်ရန် လာသော မင်းနှင့် ပရိသတ်တို့အား ဆရာတော်သည် ခြေထောက်မှ သင်္ကန်းစည်းထားသည့် ဒါဏ်ရာကို ပြပြီး “ငါ၏ သီလပျက်စီးပါမူ ဤဓားမောက်သည် ချသောခဏ ရေ၌ မြုပ်ပါစေသား။ စင်ကြယ်ပါမူ ရေဝယ် ကူးစေသား”ဟု တောင်ဖီလာကန်၌ပင် သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်၍ ပြတော်မူလေသည်။
ဓားမသည် ရေတွင်မမြုပ်ပဲ ရေ၌ ကူးခတ်သွားသည်။ ဆန်းကြယ်သောဖြစ်ရပ်ကြောင့် မင်းနှင့် ပရိသတ်အပေါင်း ဆရာတော်၏ သီလသမာဓိက အံချီးမကုန်ဖြစ်သွားကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဓားမ ရေကူးဆရာတော်ဟူ၍ လည်း ထပ်ဆင့် ကျော်ကြားသွားခဲ့လေတော့သည်။
ဓမ္မာစရိယ ဦးေဋ္ဌးလှိုင် (ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ)